Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland oo tagay Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland oo tagay Gaalkacyo
August 22, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland Cabdixakiim Cumar Camay. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Wefdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dowlada Puntland Cabdixakiim Cumar Camay ayaa maanta oo Isniin ah gaaray maagaalada Gaalkacyo oo shalay ay ka dhaceen qaraxyo isbiimayn ahaa.
Dhanka kale, Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo safar shaqo u jooga magaalada Addis Ababa ee Dalka Ethiopia ayaa la filayaa inuu maanta gaaro magaalada Gaalkacyo.
Tirada dhimashada ka dhalatay qaraxyo mataano ahaa oo shalay oo Axad ahayd lala beegsaday xarunta dowlada hoose ee Gaalkacyo ayaa gaartay 30 qof, halka dadka dhaawaca ahna ay yihiin ilaa iyo 50 qof, sida saraakiisha caafimaadka Gaalkacyo ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
June 13, 2020 Madaxweynaha DFS Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka Somaliland oo la filayo in ay kulan ku yeeshaan Jabuuti